इतिहास रच्न खोज्दैछन् निर्देशक प्रितम गुरुङ , को हुन् प्रितम गुरुङ ? ( फोटो फिचर सहित...) - News - Radioupatyaka
Studio Time (NPT) : 06:05:22 AM
रोधी सिने अवार्ड भब्यरुपमा सप्पन्न
अमेरिकाले भिसादिनुपुर्व आवेदकको फोन रेकर्ड र सोसल मिडिया पनि जाँच गर्ने
इजरेलमा धमाका मच्चाउँदै डोमा भन्छिन् ,‘नेपाली दिदिबहिनीले गरेको माया देख्दा छक्कै परे’
'गोर्खा पल्टन'का खलनायकले जित्लान त पहिलो 'रोधी सिने अवार्ड २०७३'
एकै निर्देशकका ४० चलचित्रबीच प्रतिस्पर्धामा, प्रथम रोधी सिने अवार्ड माघ २० मा हुने,
मीरा राई विश्वकै साहसी वर्ष व्यक्ति घोषित
पार्किङमा राखेको साझा बसमा तोडफोड
मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू यस्ता छन्
‘पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल पुनः एकीकरण गरेका हुन्’(प्रा. दिनेशराज पन्त)
‘जेठ महिनाभित्र नेपाल लोडसेडिङ मुक्त- जनार्दन–कुलमानको सँयुक्त घोषणा
विमानस्थलको 'सेटिङमा' सुन तस्करी, सिआइबीद्वारा ३३ किलो सुन बरामद
सडक चौडा पीडितको बन्द, सरकार पछि नहट्ने
गुरुङ चलचित्र जगतमा चलेको अनि आफ्नै ब्रान्ड बनाएको नाम हो प्रितम गुरुङ । बिगत २ दशक देखी गुरुङ फिल्म मै सक्रिय प्रितम को पछाडी थुप्रो विशेषण जोडिएको छ । पहिलो गुरुङ नायक , सबैभन्दा बढी रेकर्ड कायम गर्ने निर्देशक आदि इत्यादि । हुन पनि प्रितम ले गरेको काम अरुले गर्न सकेको छैन र सधै पहिलो भएर बसी रहे ।
पहिलो गुरुङ नायक
प्रितम गुरुङले नै पहिलो पल्ट बिदेश भुमि सिक्किममा फिल्म शुटिङ गर्नु भएको थियो जुन फिल्म ङोल्स्यो थियो । गुरुङ फिल्मको ईतिहासमा हङकङमा पहिलो पटक गुरुङ फिल्म प्रदर्शन वहांले नै गर्नु भएको थियो । वहां यस्तो ईतिहास रच्ने काम धेरै गर्नु भएको छ । त्यस मध्ये २० दिनमा २ फिल्म को छायांकन सक्ने निर्देशक पनि हुन वहां । ५ वटा गित र फाइट को दृश्य सगित २० दिनमा गुरुङ फिल्म आशेबा र पुन्टे साइला शुटिङ सकेको थियो । त्यस्तै ३ महिनामा ३ फरक भासाको चलचित्र निर्देशन पनि वहांले नै गर्नु भयो । बि स २०६३ मा अशोजमा यानिमाया (मगर भाषाको फिल्म ) कार्तिक मा रोसै म्हि ( गुरुङ भा भाषा ) मङ्सिरमा सोल्टिराजा (नेपाली भाषा ) । त्यस्तै गरि शुटिङ नजादै रिलिज डेट ( फिल्म अस्मिता ) । डबल रोल , फिल्म को सिक्वेल आदि जस्ता काम वहांले नै गर्नु भएको हो जो अरुले गुरुङ फिल्म मा गरेको छैनन् ।
अहिले आएर , निर्देशन को १५ बर्से करियरमा ४० फिल्म निर्देशन गरिसकेका छ्न भने आफ्नै फिल्म को अवार्ड रोधी सिने अवार्ड २०७३ गर्न तम्सिदै छन । नेपाल को हक मा यो पहिलो पटक नै हो भने विश्व बजारमा पनि यस्तो एकै निर्देशक को फिल्म को अवार्ड भएको पाइएको छैन । गिनीज वल्र्ड रेकर्ड मा पनि नाम लेखाउने प्रायसमा हुनुहुन्छ ।
गत बर्ष पहिलो ऐतिहासिक गुरुङ फिल्म अवार्ड मा लाइभ टाइम एचिभमेन्ट थापिसकेको प्रितम गुरुङ को रोधी सिने अवार्ड आफैमा नया अनि नौलो परिपाटीको शुरूवात हो, नेपाली अनि आदिवासी फिल्म जगतमा ।
समिरको निर्देशनमा ‘आँ छु यायँ ?’ बन्ने
अहिलेसम्मको मतपरिणाममा कांग्रेस पहिलो, दोस्रोमा ३ पार्टीको टक्कर (सूची)